Kachasị mma nke Hong Kong, dị ka Singapore | Njem zuru oke
Nke kacha mma na Hong Kong, dị ka Singapore
Ọ karịala afọ iri na isii kemgbe Hong Kong nweere onwe ya na Bekee. Ma obodo ahụ gara n'ihu na ikuku ahụ dị iche na ndị agbata obi ya ndị ọzọ nke Asia.
N'agbanyeghị China, agwaetiti ahụ adịghị anya na ịdị n'otu na nkwụsi ike nke obodo ndị ọzọ dịka Shanghai na Beijing. Ma ọ dịkwa iche na nnukwu oge a Singapore.
Hong Kong bụ onye hụrụ okomoko n'anya, ọkaibe, anụ ọhịa na anụrị. Enweghi ike ịkọwa Britain ma mepụta ngwakọta dị mma nke jupụtara na amara ya. Anyị na-agwa gị ebe a ihe ị na-ekwesịghị ịhapụ n'obodo a mara mma.
1 Ogige Hong Kong
4 Egwuru egwu na Lan Kwai Fong
Ogige Hong Kong
Otu n'ime echiche kachasị echefu bụ nke profaịlụ nke skyscrapers ya mgbe anyanwụ dara. Dị ka ụlọ na-enwu na a ememe nke ọkụ na ihe ịrịba ama na Chinese na English. Zọ kachasị mma iji bulie ya bụ na Ferzọ ụgbọ mmiri Star na nkeji iri ọ bụla na-ahapụ piers. N'ihe na-erughị euro, ihe ochie ndị a na-eme njem na nkeji iri na ise.
Enweghi ike ime ka obi di gi uto site na nkpuru-obi uto, obere osikapa ma obu mgwakota agwa, nke eji mmanu, oporo ma obu akwukwo nri na tii tii n’ehihie. Halllọ Nzukọ Obodo na-eme mkpọtụ ya na ndị ọrụ na-agafe n'ụgbọala n'akụkụ tebụl na nkata ịhọrọ achara. Achịcha anụ ezi ma ọ bụ nke nwere osikapa na osikapa bụ nri ga-ahụ site na obodo Bekee ochie. Na ka ị ghara ichefu na ị nọ na China, nri Cantonese na-enye efere ndị na-abụghị maka oke egwu: azụ azụ shark, akwa puku afọ, ụkwụ ezi.
Otu n'ime ebe kachasị mma iji kpoo mpaghara ahụ Ọ bụ n'ahịa ka ị ga-ahụ ndị na-agba afa, ndị na-ede akwụkwọ ozi, ndị na-agụ egwú opera ndị China, ihe ndị na-eitationomi, ndị na-ere ụdị ahịa na iwu na-akwadoghị. Ahịa na-emeghe kwa ụbọchị site na elekere anọ nke elekere ruo elekere iri na abụọ nke 16, ụzọ kachasị mma iji ruo ebe ahụ bụ metro.
Egwuru egwu na Lan Kwai Fong
Ndị na-ahụ maka ego na-abịa saịtị a mgbe ha rụchara ọrụ, ndị na-azụ ego na ndị isi na Hong Kong. Mkpọrọ dị larịị na-echepụta ihe ntụchi na ndị ahịa na-aga n'okporo ámá ka ha na ndị nke ụlọ mmanya na-esote ma ọ bụ na-abụghị ndị ọzọ. Na ngwụsị izu ọ ga-esiri ike ijegharị n'etiti ha n'ihi na onye ọ bụla ga-anọ n'okporo ámá na-a drinkingụ mmanya, na-agba egwu ma na-ekpori ndụ dịka a ga-asị na ụwa na-agwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nke kacha mma na Hong Kong, dị ka Singapore
Àkwà Arkadiko, otu n’ime àkwà mmiri ndị kacha ochie n’ụwa
Kedu ka China si dị na September